इमिग्रेसन कोर्टलाई खबर नगरी अमेरिका छोड्न सक्छु होला ? - Vishwa News | Popular Nepalase News Media In USA
म ३ वर्षअघि अमेरिका प्रवेश गरेको हुँ । एक वर्षभित्रमा मित्रहरुको सहयोगबाट असाइलमको निवेदन अमेरिकी अध्यागमनमा पेश गरेको थिएँ । गत ३–४ महिना अघि अन्तरवार्ता आयो र अहिले मेरो असाइलमको निवेदनलाई इमिग्रेसन कोर्टमा पठाइदिएको छ । केही हप्ताअघि न्यूयोर्क इमिग्रेसन कोर्टबाट ‘मास्टर हियरिङ’को डेट आयो । २ वर्षपछाडिको मिति दिएर पठाएको छ । साथीहरुको अनुभवअनुसार मेरो कोर्ट केर्स पूरा हुन घटीमा ३ वर्ष लाग्ने कुरा गरेको छ । नेपालमा श्रीमती र २ ससाना बच्चाहरु छन् । पारिवारिक समस्याले गर्दा नेपाल फर्कनुपर्ने स्थिति छ । यस्तो अवस्थामा म नेपाल फर्कन सक्छु कि सक्दिन ? यदि म नेपाल फर्कन वा अमेरिका छोडेर जाने हो भने मैले के गर्नुपर्ने हुन्छ ? के मैले इमिग्रेसन कोर्टलाई खबर नगरी अमेरिका छोड्न सक्छु होला ? के प्रक्रियाबाट नेपाल गए भविष्यमा फेरि आउन सकिने बाटो रहनेछ ? धेरै आशा गरेर यो प्रश्न तपाईंसमक्ष राखेको छु । आशा छ निराश पार्नु हुने छैन ।
– सीके ढुङ्गाना, न्यूयोर्क
ढुङ्गानाजी, यो दुविधाको अवस्थामा वकिलसँग नै परामर्श गर्ने जमर्को गर्नुभएकोमा तपाईंलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । तपाईंको प्रश्नलाई हेर्दा वकिल नराखी आफैंले असाइलमको निवेदन युएससीआईएसमा पेश गर्नुभएको देखिन्छ । तपाईंको वस्तुस्थिति र अहिले न्यूयोर्क इमिग्रेसन कोर्टको ब्याकलग स्थितिलाई हेर्दा तपाईंको असाइलमको निवेदनको अन्तिम सुनुवाइ हुन घटीमा ३ वर्ष वा बढी लाग्न सक्ने देखिन्छ । इमिग्रेसन कोर्टले तपाईंको निवेदन स्वीकृत नगरेको खण्डमा र अपिल गरेमो घटीमा अर्को १ वर्षदेखि ३ वर्षसम्म लाग्न सक्ने हुन्छ । यो भयो समयावधिका कुरा ।
अब तपाईंलाई डीएचएसले रिमोभल प्रोसिडिङमा राखिसकेकाले तपाईंको निवेदनको टुङ्गो नलागीकन अमेरिका छाडेर गए त्यसको विभिन्न परिणामहरु आइन पर्न सक्छ । अध्यागमन अदालत र डीएचएसलाई खबर नगरी र स्वीकृति पनि नलिई अमेरिका छाडी जानुभए तपाईंले सेल्फ–डिपोर्टेसन गरेको ठहरिनेछ । अर्थात् तपाईंले असाइलमको निवेदन परित्याग गरी स्वतः डिपोर्ट गरेको मानिनेछ । यसो भएको खण्डमा तपाईंले अमेरिकी अध्यागमनबाट १० वर्षका लागि कुनै पनि सुविधा प्राप्त गर्न सक्नु हुने छैन । यसको विकल्पका रुपमा तपाईंले भोलुन्टरी डिपार्चरको सुविधाको माग गर्न सक्नुहुनेछ । अर्थात् अमेरिका छाड्नुअगावै इमिग्रेसन कोर्टमा यो भोलुन्टरी डिपार्चर वा राजीखुसी केस छोड्ने निवेदन गर्नुभयो र अदालतले पनि तपाईंलाई सो सुविधा प्रदान गरेको खण्डमा घटीमा ६० दिनदेखि १२० दिनसम्मको समय तपाईंलाई प्रदान गर्नेछ । डीएचएसलाई तपाईंको भोलुन्टरी डिपार्चरको निवेदन स्वीकार्य छ र न्यायाधीशे पनि यो सुविधा प्रदान गरीनिर्णय दिएको खण्डमा र तपाईंले पनि यो सुविधाको शर्तहरु पालना गरी तोकिएको मितिभित्र अमेरिका छाडी जानुभयो भने तपाईंविरुद्ध डिपोर्टेसनको धब्बा लाग्ने छैन । तर, यो सुविधा जोसुकैले प्राप्त गर्न सक्ने छैन । यो सुविधा प्राप्त गर्नका लागि तपाईं (१) अमेरिकामा घटीमा १ वर्षदेखि बसोवास गरेको हुनुपर्नेछ, (२) तपाईंले आफ्नो शरणार्थीको निवेदन अर्थात् आई–५८९ एप्लिकेसन फिर्ता लिनुहुनेछ, (३) तपाईंले अमेरिका वा संसारको कुनै पनि ठाउँमा आपराधिक काम गर्नुभएको छैन, (४) तपाईंसँग आफ्नो स्वदेश फर्कनका लागि भ्यालिड पासपोर्ट छ र फिर्ता जानका लागि लाग्ने खर्चका लागि पैसा वा फण्डको व्यवस्था छ, (५) यो सुविधा लिई अमेरिका छाड्ने र शरणार्थीको निवेदन फिर्ता लिने निर्णय कसेको दबाबमा नपरी स्वतन्त्ररुपमा आफैंले गर्नुभएको हो, र (६) न्यायाधीशले तोकेको समयभित्र अमेरिका छाडी जानुहुनेछ ।
यी माथिका शर्तहरु पूरा गर्नुभएमा न्यायाधीशले तपाईंलाई डिपोर्ट नगरी स्वदेश फिर्ता जान अनुमति दिन सक्नेछ । कुनै कुनै अवस्थामा न्यायाधीशले घटीमा ५ सय डलर वा बढी रकम पनि बण्ड वा धरौटी राख्न माग गर्न सक्नेछ । यदि धरौटीको माग गरेमा भोलुन्टरी डिपार्चरको निर्णय दिएको दिनदेखि ५ बिजनेस दिन भित्रमा सो धरौटीको रकम डीएचएसमा जम्मा गर्नुपर्नेछ । यदि धरौटीको रकम तोकिएको समयभित्रमा जम्मा गर्न सकिएन वा जम्मा गरे पनि तोकिएको समयभित्रमा अमेरिका छोड्न नसके वा नछोडे, सो भोलुन्टरी डिपार्चरको निर्णय वा अर्डर स्वतः डिपोर्र्टेसन अर्डरमा परिणत हुनेछ । अब तपाईंको केसमा २ वर्षपछि मात्र पहिलो मास्टर सुनुवाइ मिति भएकाले तपाईंलाई एक अनुभवी कानून व्यवसायी वा वकिलको सहयोग लिई सक्दो छिटो स्वेच्छाले देश छोड्ने वातावरण मिलाउन हुन सुझाव छ । वकिलमार्फत निवेदन वा मोसन परे इमिग्रेसन जजले तपाईंको केसका लागि मास्टर सुनुवाइ अगाडि सारी तपाईंलाई अमेरिका छाडी जानका लागि वातावरण सिर्जना गर्न सहयोग पनि गर्न सक्नेछ ।